China Low Volume Medical PCB SMT Assembly emepụta na suppliers | Kangna
PC obere SMT Assembly dị ala
SMT bụ ndebiri nke Igwe Igwe Elu Elu, Teknụzụ kachasị ewu ewu na usoro na ụlọ ọrụ mgbakọ kọmputa. A na-akpọ Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe (SMT) Mkpa Igwe ma ọ bụ Igwe Igwe Mkpa. Ọ bụ ụdị teknụzụ mgbakọ sekit nke na-etinye ihe ndị na-enweghị isi ma ọ bụ dị mkpụmkpụ (SMC / SMD na Chinese) n'elu nke Ebipụtara Circuit Board (PCB) ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị na mbara ala, wee welds na mgbakọ site na ịgbanye ọkụ ma ọ bụ itinye ịgbado ọkụ.
Ke ofụri ofụri, electronic ngwaahịa anyị na-eji na-mere nke PCB gbakwunyere dị iche iche capacitors, resistors na ndị ọzọ na electronic components dị ka sekit esereese, otú nile di iche iche nke eletriki ngwa mkpa dị iche iche SMT mgbawa nhazi technology hazie.
SMT isi usoro ọcha na-agụnye: na ihuenyo ebi akwụkwọ (ma ọ bụ dispensing), arịọnụ (gwọọ), Reflow ịgbado ọkụ, ihicha, ule, mmezi.
1. Screen obibi: The ọrụ nke ihuenyo ebi akwụkwọ bụ ihihi solder tapawa ma ọ bụ patch nrapado na PCB si solder na mpe mpe akwa iji kwadebe maka ịgbado ọkụ nke mmiri. Ngwa akụrụngwa ejiri igwe nyocha igwe (igwe nyocha), dị na njedebe ngwụcha usoro mmepụta SMT.
2. mama spraying: Ọ tụlee gluu ka ofu ọnọdụ nke PCB osisi, na ya isi ọrụ bụ idozi mmiri na PCB osisi. Ngwa akụrụngwa bụ igwe na-ekesa, nke dị na njedebe ngwụcha nke akara SMT ma ọ bụ n'azụ akụrụngwa nyocha.
3. Ugwu: Ọrụ ya bụ ịwụnye ihe ndị na-eme mgbakọ n'elu n'ụzọ ziri ezi na ọnọdụ PCB. Ngwa akụrụngwa ejiri igwe SMT, nke dị n'azụ igwe nbipụta igwe na usoro mmepụta SMT.
4. ọgwụgwọ: Ya ọrụ bụ gbazee na SMT nrapado nke mere na elu nzukọ mmiri na PCB osisi nwere ike ike gbasoro ọnụ. Akụrụngwa ejiri mee ihe na-agwọ oku, nke dị n'azụ SMT SMT Production.
5. Reflow ịgbado ọkụ: ọrụ nke reflow ịgbado ọkụ bụ gbazee solder tapawa, nke mere na elu nzukọ mmiri na PCB osisi ike arapara ọnụ. Ngwa akụrụngwa ejiri mee ka ọkụ na-enwu ọkụ, nke dị na SMT mmepụta ahịrị n'azụ igwe ntinye SMT.
6. nhicha: The ọrụ bụ wepụ ịgbado ọkụ fọduru dị ka igba na gbakọtara PCB na-emerụ ahụ mmadụ. Ngwa akụrụngwa bụ igwe nhicha, enweghị ike idozi ọnọdụ ahụ, nwere ike ịdị n'ịntanetị, ma ọ bụ na ịntanetị.
7. Nchọpụta: Ọ na-eji ịchọpụta ịgbado ọkụ àgwà na nzukọ àgwà nke gbakọtara PCB. Akụrụngwa ejiri gụnyere iko dị elu, microscope, ngwa nyocha (ICT), ihe nnwale nnwale na-efe efe, akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa (AOI), sistemụ X-ray, akụrụngwa nnwale arụ ọrụ, wdg. Ọnọdụ ahụ nwere ike ịhazi ya nke kwesiri akụkụ nke usoro mmepụta dịka ihe nyocha ahụ chọrọ.
8. Mmezi: ọ na-eji rework na PCB na ahụrụ na mmejọ. Ngwá ọrụ ndị eji eme ihe na-agbazi, na-arụ ọrụ nrụzi, wdg. Nhazi ahụ bụ ebe ọ bụla na akara mmepụta.
Nke gara aga: otu aka nke imikpu ọla edo dabere na Board
Osote: ngwa-atụ n'aka prototype gold plating PCB na Counter sink onu